उरुग्वे-फ्रान्स तथा ब्राजिल-बेल्जियमबीच भिडन्तः कसले मार्ला बाजी ? | Citizen Post News
उरुग्वे-फ्रान्स तथा ब्राजिल-बेल्जियमबीच भिडन्तः कसले मार्ला बाजी ?
२०७५ असार २२ गते ०७:३७
काठमाडौं । रसियामा जारी विश्वकप २०१८ को क्वाटरफाइनलका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछ । पहिलो खेल अन्तिम आठमा पुगेका भाग्यमानी टोलीमध्येबाट उरुग्वे र फ्रान्सबीच नेपाली समयअनुसार शुक्रबार साँझ ७ः४५ बजे हुनेछ । दुवै टोली एकदमै बलियो मानिन्छ । दोस्रो खेल अन्तर्गत शुक्रबारै राति ११ः४५ बजे पाँच पटकको विजेता ब्राजिलले बेल्जियमबीच भिडन्त हुनेछ ।
त्यसैगरी शनिबार साँझ ७ः४५ बजे स्वीडेन र इङ्ल्याण्डबीच प्रतिपर्धा हुनेछ । क्वाटर फाइनलको अन्तिम खेलमा आयोजक रसियाले क्रोएसियाको सामना गर्नेछ । क्वाटर फाइनल पुग्ने आठ टोलीमध्ये चार वटा विश्व विजेता बनिसकेका टोली हुन् भने चार वटाले प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सकेका छैनन् ।
ब्राजिल सन् १९५८, १९६२, १९७०, १९९४ र २००२ को विजेता हो । उरुग्वेले पहिलो विश्वकप सन् १९३० र १९५०, फ्रान्स सन् १९९८ र इङ्ल्याण्ड सन् १९६६ को विजेता हो । त्यसैगरी क्वाटरफाइनलमा पुगेका बेल्जियम, क्रोएसिया, स्वीडेन र रसियामध्ये अहिलेसम्म स्वीडेन १९५८ मा ब्राजिलसँग फाइनमा पराजित भएको थियो । आयोजक रसिया पहिलोपटक क्वाटर फाइनल पुगेको हो । बेल्जिम सेमिफाइनसम्म पुगेको टोली हो ।
प्रतियोगितामा नवप्रवेशी पानामा र आइसल्याण्डले खासै प्रदर्शन गर्न सकेनन् । आइसल्याण्डले पहिलो खेलमा दुई पटकको विश्व विजेता अर्जेन्टिनालाई बराबरीमा रोक्न सफल भए पनि पछिल्ला दुई खेल क्रमशः नाइजेरिया र क्रोएसियासँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो । पानामाले बेल्जियम, इङ्ल्याण्ड र ट्युनिसियासँग पराजित हुँदै घर फर्कियो ।